Ruzivo nezveCuba, iwe unoziva izvi zvinoda kuziva nezve Cuba? | Absolut Kufamba
Pese paunofunga nezveCuba, nzvimbo dzinonakidza, mahombekombe akanaka, vanhu vanofara uye vane hushamwari, kuwedzera kutsika uye tsika dzeCuba izvo vazhinji vedu tinotoziva. Asi kunyangwe isiri iyo yekutanga nguva yako kuenda kuiyi nyika yeCaribbean, izano rakanaka kuzvizivisa uye kudzidza zvishoma nezve ichi chitsuwa chinoshamisa. Naizvozvo, pazasi isu tinogovana ruzivo nezveCuba uye zvimwe zvinoda kuziva nezveCuba.
1 Chokwadi chekuziva nezveCuba
1.1 Nhoroondo yeCuba
1.2 Kubudirira kweCuba
1.3 Zvimwe zvinoda kuziva nezve Cuba
Chokwadi chekuziva nezveCuba
Kuongorora muchidimbu iyo chokwadi chekuziva nezveCuba, isu ticha tarisa pane zvimwe zvinhu zvakaita senhoroondo, budiriro uye rumwe ruzivo nezve Cuba iyo ichakubatsira iwe.
Unogona kusazviziva, asi zita repamutemo reCuba ndiro "Republic of Cuba", iyo inoumbwa zvakare neChiwi cheCuba, Isla Juventud uye zvitsuwa zvidiki zvinoverengeka.
Kazhinji vafambi vanodzokororwa vanoreva Cuca se "El Caimán" kana "El Cocodrilo", kunyanya nekuda kwekuita kwayo kunge chimiro chayo kana ichionekwa kubva pakuonekwa kwemuchadenga.
Nekuda kwekuwedzera kwenzvimbo, Cuba inoonekwa seichiwi chikuru kwazvo muCaribbean, sezvo ichifukidza nharaunda ye110.860 km².
Kwete izvozvo chete, Cuba ine vanopfuura mamirioni gumi nevagari, ichiiita chiwi chechipiri chine vanhu vakawanda muCaribbean, pamwe nechitsuwa chegumi nenhanhatu chine vanhu vakawanda pasi rese.
Chimwe chei zvinonakidza chokwadi cheCuba ndeyekuti vagari vayo vekutanga vaive maAmerican maIndia anozivikanwa saCiboney. Vakatama kubva kuSouth America, nepo vaTaíno vakasvika vachibva kuHispaniola muzana ramakore rechipiri AD uye neGuanajatabey, vaive munzvimbo yekumadokero kweCuba pakatanga kusvika maEuropean.
Christopher Columbus akasvika pamhenderekedzo yekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweCuba musi waOctober 28, 1942, pedyo zvikuru neinozivikanwa seBariay, muRuwa rweHoguín. Panguva iyoyo, Columbus akati chitsuwa cheCuba chehumambo nyowani hweSpain.
Kunyangwe pasina chokwadi pamusoro peizvi, zvinofungidzirwa kuti zita reCuba rinotorwa kubva mumutauro weTaíno. Shanduro yako yepedyo inogona kunge iri "Nzvimbo ine ivhu rakaorera rakawanda" (cubao) kana "nzvimbo huru" (coabana). Zvinotendwawo kuti Christopher Columbus akatumidza Cuba zita reCiudad Cuba kuPortugal.
Kugara kwekutanga kweSpanish muBaracoa kwakatangwa naGeorge Velázquez de Cuéllar mugore ra1511.
La Habana ndiro guta rine vanhu vazhinji muCuba Iine vanopfuura mamirioni maviri vagari, iri zvakare yechitatu ine vanhu vazhinji muCaribbean. Iri ndiro guta guru reCuba uye iri pano panowanikwa miviri yepamusoro yeHurumende neHurumende yeCuba.
Nekuda kwekuvandudzwa kwechitsuwa ichi seSpanish Colony, vagari vemuCuba vakaderera nekukasira, zvakanyanya semhedzisiro yechirwere, pamwe nemamiriro ezvinhu akaomarara aive muzana ramakore rinotevera.
Huwandu hukuru hwevaranda vemuAfrica vakaunzwa kuCuba kuti vashande munzimbe nenzvimbo dzekofi. Nekuda kweizvozvo, Havana yakava yekuvhura pad yezvikwata zvegore nepfuma dzinoenda kuSpain kubva kuPeru neMexico.
Cuba yakaramba iri nyika yeSpain kusvika 1898, kunyangwe vatungamiriri vashanu vakasiyana vakaedza kutenga chitsuwa pakati pa1845 na1898. Mutungamiri McKinley yakapa mamirioni mazana matatu emadhora kutenga Cuba, nguva pfupi maAmerican asati apinda muhondo yeSpanish neAmerica ye1898.
Cuba yakawana rusununguko rwayo mushure mekukundwa kweSpain muSpain-American War. Kunyangwe paine chokwadi uye nekutenda kuChibvumirano cheParis, United States yakasara ichidzora chitsuwa ichi sedziviriro muna Ndira 1899 uye yakawedzera kudzora kwayo kusvika 1902.
Zvimwe zvinoda kuziva nezve Cuba
Tichapedzisa chinyorwa chine mana kuziva chokwadi nezveCuba icho iwe chaunofanirwa kuziva:
Mugore ra1959, Fidel Castro inoonekwa pachiitiko sechinhu chakakosha muuto revapanduki revapanduki vechiKomonisiti iro rinozovatungamira mukukunda Kubva panguva iyoyo, hurumende yehutongi yaFidel Castro yaizogara kwemakore makumi mashanu, kusvika Kukadzi 50, paakamanikidzwa kusiya chigaro nekuda kwekunetsekana kwehutano.
Mutungamiri weUnited States, Dwight David Eisenhower, akatambira muna 1960, chirongwa cheCIA chekubata nekudzidzisa boka revapoteri veCuba nechinangwa che kupidigura hurumende yaCastro. Kupinda kwakakurumbira kweBay of Pigs kwakaitika muna Kubvumbi 14, 1961. Panguva iyoyo, vangangoita 1.400 vapoteri veCuba vakamhara muBay of Nguruve, zvisinei vakakundikana mukuyedza kwavo kupidigura Hurumende.
KuCuba, vese vagari vane makore anopfuura gumi nematanhatu ekuberekwa uye vasina kutongerwa mhosva yemhosva vanogona kuvhota. Sarudzo dzekupedzisira dzakaitwa kuCuba dzaive musi wa16 Kukadzi 3, sarudzo inotevera iri muna 2013.
Raúl Castro, uyo parizvino anotonga Cuba, akazivisa kuti achasiya chigaro mugore ra2018, pakupera kwetemu yake yemakore mashanu.
Unoziva here zvimwe chokwadi chekuziva nezveCuba Chii chatinogona kuwedzera pane izvo zvatakakuudza? Tiudze nezve chiitiko chako uye tibatsire isu kuwedzera ruzivo urwu nezve Cuba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Ruzivo nezveCuba
Cristobal Colon akasvika kuCuba muna 1492 kwete muna 1942 hahaha, kwaziso
Pindura kuna Mariam
Iyo 2019-20 TV nguva iri kuumba kuti ive yakaoma kwazvo uye segore risingaverengeke parizvino. Iko kune makuru madhiri ekushamisa, ekutanga vatyairi vemhepo vanouya pamwe nekungoriwo akati wandei ekuti reboots / kumutsidzira mumabasa, futi. Nekudaro sekudaidzira kunoenda, "Buda neyakare, mukati neiyo nyowani-nyowani." Nepo kumwe kuunganidzwa kuri kuperera pane pre-yakarongedzwa, yakanyatso rongedzwa yakakwira noti, dzakasiyana siyana showes 'lifespans akatoderedzwa mukusimudzira mapfupi. Nekudaro, zvinosuruvarisa, pazasi pane runyorwa rweese ETVVHONI anoratidza ayo iwe aunogona kunge uchizarurira kuonekana kwegore rino.
Chaizvoizvo ndiro dzedunhu reCaribbean